राजनीतिक दलको प्राथमिकता भ्यू टावर कि शिक्षा ? Setokhari ::. News Portal
शनिबार, जेठ ७, २०७९ ०२:१३:२७
नेपालगन्ज १७ चैत्र : राजनीतिक दलको प्राथमिकता भ्यू टावर हो कि शिक्षा भनेर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारहरुले आज दलका नेतासँग प्रश्न गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूह र कारखानाले गरेको ‘पत्रकारको दृष्टिमा शिक्षाका मुद्दा’ विषयक अन्र्तक्रियामा उनीहरुले यो प्रश्न गरेका हुन् ।
वरिष्ठ पत्रकार राजन शर्माले कार्यक्रममा संघीयतामा शिक्षा नामक कार्यपत्र पेश गर्दै धेरै स्थानीय तहहरु शिक्षा सुधारमा भन्दा अन्य क्षेत्रमै केन्द्रित भएको बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमामा भएका समस्या उजागर गर्दै शर्माले काम गर्ने शैली पुरानै किसिमको हुँदा शिक्षामा सुधार हुन नसकेको स्पष्ट पारे । कतिपय ठाउँमा शिक्षामा बजेट प्रशस्त मात्रामा छुट्याइएको भएपनि जनशक्तिको कमीले बजेट कार्यान्वन हुन नसकेको उनको धारणो थियो ।
कार्यक्रममा सिकाई समूहका अध्यक्ष सुदर्शन घिमिरे, आजको शिक्षा साप्ताहिकका सम्पादक सुदर्शन घिमिरे, शिक्षा अनुसन्धानकर्ता राजकुमार बराल, वरिष्ठपत्रकार राजन शर्मालगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत करिव ३० जना शिक्षा पत्रकारको सहभागी रहेको थियो ।